Ndenye Blog: Hamelife | Martech Zone
Hamelife bu blog raara nye ndi nne na nna choro idi iche. Rentzụ ụmụ bụ ihe m hụrụ n'anya. Enwere m otu nwa nwoke bidoro IUPUI nke ada a na ada nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Abụ m nwa okorobịa, ma eleghị anya, emehiere ihe ọ bụla nne ma ọ bụ nna nwere ike ime. Ekwenyesiri m ike na n'ụzọ ụfọdụ, ọrụ ebube nke ndụ, Chineke na-enye ndị nne na nna ohere imehie ọ bụla ma nwee nnukwu ụmụaka - ọ bụrụhaala na anyị ji obi anyị niile hụ ha n'anya. na debe ha n’iru anyị!
Aga m etinyekwu uche na osikapa ma mehie ihe m mehiere ka ndị ọzọ ghara inwe ihere ga-eme ha!
Mmejuputa iwu-nke Isiokwu Cutline dị egwu. Ọ bụ isiokwu dị ịtụnanya nwere nhazi ọdịdị nke kachasị mma ma wuo maka nnukwu ojiji. Enwere m mmasị karịsịa maka otu ị si jiri CSS mee ihe maka akara ngosi na usoro gị, mana ịchekwa ọdịnaya maka Search Search ka ị gụọ. Ị mere nke ọma! Ntuziaka mbụ bụ ka ị tinye a Sitemapma! Nke a bụ ụzọ maka usoro nchọta iji jikwaa ọdịnaya saịtị gị na-enweghị ike ịkọwapụta ya n'onwe ha.
Ọkacha mmasị m Sitemap ngwa mgbakwunye bụ 3.0b7 mbipute nke Ntanetị Google Sitemap. Emeela m onwe ya ka ọ gbanwee Yahoo! nakwa zigara koodu na-ede akwụkwọ na-ede akwụkwọ ma ọ na-adịghị wuru ya n'ime ọzọ ntọhapụ ma. Enwere m olileanya na ọ ga-etinye ya.
Ozugbo ị nwetara saịtị saịtị gị n'ọnọdụ, ihe ọzọ bụ imelite faịlụ gị robots.txt na ọnọdụ nke saịtị saịtị ahụ. Nke a bụ mgbakwunye pụtara nso nso a na nkọwapụta Sitemap, mana ọ ka mma iji ya mee ihe ugbu a karịa oge! Nke a bụ otu o kwesịrị isi lee anya:
Onye ọrụ-nnọchite: * Disallow: / wp- Sitemap: http://www.hamelife.com/sitemap.xml
Rory rịọrọ ka m metụ aka na ma otu ịde blọgụ kwesịrị ịbụ blog nke ya ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke hamelife. Aga m ewere ụzọ wimpy wee kwuo na echere m, n'ikpeazụ, ọ bụ gị. Agbanyeghị, enwere m ike ịghọta ma ọ bụrụ na ndị folks na-ekwu banyere nke ahụ - ebe isiokwu abụọ ahụ dị ezigbo iche.
Naanị echiche, mana enwere ụzọ ị ga-esi mee peeji nne na nna na ibe blọgụ nke ndị mmadụ nwere ike ịga na nri abụọ, otu maka nke ọ bụla? Echere m na enwere ike ịrụzu nke a site na iji ngwa mgbakwunye Tagging dị ka Ultimate Tag Warrior na iji mkpado edebanye aha ya na “nne na nna” ma ọ bụ “blọgụ”. Ọ nwere ike were ụfọdụ ọrụ, mana ọ ga-ama mma!
Achọpụtara m mgbe m nwalere URl, dị ka http://www.hamelife.com/parenting na peeji 404 nkịtị na-abịa. Lelee post m na-eme ka ibe 404 gbanwee - ọ dị ka ịmepụta igwe nchọgharị maka saịtị gị.
Hamelife bụ nkọ saịtị na enweghị ọnụ ahịa. Rory nwere usoro aghụghọ ole na ole. Lelee hamelife menu n'elu nri… nnọọ pụrụ iche (na fun!). Daalụ maka ịhapụ m tinye blog gị, Rory.
Jul 8, 2007 na 4:01 PM
Daalụ maka ịhapụ m tinye blog gị, Rory.
Are na-egwu egwu, Doug? Enwere m ekele maka gị maka itinye anya na-enye aka na saịtị ahụ. Achọrọ m ndụmọdụ niile m ga - enweta, enwere m ekele maka ihe ndị ị nyere.
Izizi, ihe otito gi na-ato m. Daalụ nke ukwuu - ha na-agba ume nke ukwuu.
Ugbu a, a na m eche ma inwere ike inyere m aka na ndụmọdụ ndị ọzọ:
Point # 1 - M nke hamelife na-ewere onye ọbịa na saịtịmap. M na-eji Sitemap mere maka Cutline. Enwere m nhazi a n'ụzọ ziri ezi? Ma ọ bụ ka m kwaga ozugbo na Point # 2 ma hazie m robots.txt n'ụzọ ziri ezi?
My robots.txt na-agụ, sị:
Ajụjụ: / wp-ọdịnaya /
Ajụjụ: / wp-admin /
Ajụjụ: / wp-gunyere /
Ajụjụ: / wp-
Ikekwe: / ndepụta /
Ajụjụ: / sochie /
Ajụjụ: / cgi-biini /
enwekwara m ya na hamelife.com/wpblog/robots.txt. Ihe adighi ka odi nma na nka - odi m ka odi n’ebe ozo, mana amaghi m otu esi eme ya. Enwere m ike iji enyemaka ahụ.
Ntọala m bụ ịnwe blọọgụ na hamelife.com/wpblog, yabụ enweghị m ya na ndekọ mgbọrọgwụ. You ga-ahụ etu nke a si na-agbagwoju m anya!
Isi nke 3 - Daalụ maka ntụnye gị, aga m echekwu banyere ya. Ana m atụkwasịkwuo anya na blọọgụ nke abụọ. Amaara m na ọ pụtara ịchekwa ọdịnaya abụọ, mana m na-amụta ịla azụ karịa gbasara ịde blọgụ a - echegbula onwe gị.
Point # 4 - Ana m ele ihe WordPress 404 gị anya ka anyị na-ekwu okwu. Ọ bụ ndụmọdụ magburu onwe ya, m ga-etinye ya n'ọrụ ozugbo enwere ike.
Daalụ ọzọ, Doug. Enwere ekele dị ukwuu maka enyemaka gị.
Jul 8, 2007 na 4:41 PM
Aga m akwado itinye faịlụ robots.txt gị na ndekọ mgbọrọgwụ gị. Nwere ike ịnweta ntakịrị ntakịrị, ma tinye ntụgharị ebe na faịlụ mgbọrọgwụ gị .htaccess.
Nyegharịa robots.txt http://hamelife.com/wpblog/robots.txt
M ka ga-etinye ihe ntanetịime XML ebe yana iji ngwa mgbakwunye m kwuru na 1. Ihe ntanetị XML dị na ọkọlọtọ Sitemap. Saịtị saịtị a ga-ewughachi ya na ntinye ọ bụla ma jiri ping rụọ ọrụ nchọta ihe na-akpaghị aka. Ọ dị ezigbo mma.
Ọ bụrụ na itinye na saịtịmapị ma ọ dị na ndekọ wpblog, ị nwekwara ike itinye redirect ya na ya:
Nyegharịa saịtịmap.xml http://hamelife.com/wpblog/sitemap.xml
Jiri nlezianya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ htaccess gị (enwere ike zoo ya, yabụ kpachara anya ka ịlele faịlụ zoro ezo na sọftụwia FTP gị) ọ bụrụ na ịchọrọ ya!
Mgbe ahụ jide n'aka ịgbakwunye ahịrị saịtịmapị na faịlụ robots.txt gị. Y’oburu n’inwe uzo ighari n’ime gi htaccess file, i nwere ike iji URI… M ga-enwerịrị ndabara na mputa, obu ezie:
Jul 8, 2007 na 4:19 PM
M ka emejuputara 404.php gi, Doug.
Nwalee nke a: hamelife.com/child
ugbu a, nke ahụ bụ peeji 404 ka mma!
Ọzọ - Ọtụtụ Daalụ.